I-Georeferencing i-Googlemaps imephu ne-Arcmap - Geofumed
I-Georeferencing i-Googlemaps imephu neArmmap
NgoDisemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Google umhlaba / imephu
Ngaphambi kokuba ndichithe izithuba ezimbalwa, ndithetha ngeemifanekiso zendawo okanye iimephu ezisebenzisa ezininzi, autocad y Microstation.
Ukugqiba umjikelo, ukwenza nge-ArcGIS, ndafumana inqaku lika-Adriano, osibonisa ngokulandelelana inyathelo ngesinyathelo.
Le yembono kwiimephu zeGoogle, kwimeko yemephu.
Ukubona i-orthophoto, ukhetho lwe "satellite" luvuliwe
Ke lo mfanekiso ukhutshelwa nge «printscreen», kwaye imiphetho iyasuswa, ukuze indlela yokujonga kunye nokujonga izixhobo zingabonakali. (kwenye iposi iboniswa ukuba ungayenza kanjani ukuba into onayo i-utm ilungelelanisa okanye amanqaku olawulo)
Emva koko ifakwe kwi-Arcmap, isebenzisa ukhetho lwe "datha yedilesi", kucingelwa ukuba sineklasi yento, kunye ne-axes yendawo leyo. Ukusukela xa ungena kumfanekiso esingawaziyo ukuba uphi, ucofa kuwo kwaye ukhethe u- "zoom to layer", ke iyafumaneka kwiscreen sakho.
Senza ukuba "ukhetho lwe-georeferencing" lusebenze ngokubona / izixhobo zebar / georeferencing. Ukuyisondeza kwimephu okanye kwindawo yolawulo ongayongeza kuyo, kunye nendawo apho uqala khona kunye nesiphelo esibonakalayo kwiscreen sakho, oku kuyakwenza ukuba ubone inketho yetafile yeqhosha, ushiye kumthombo ofanayo kwaye uwongeze indawo ekuyiwa kuyo eyaziwa ngokuba yi- "imephu» enye yamanqaku akho owaziwayo, ke umfanekiso uza kuba kufutshane nendawo enomdla kuyo.
Emva kokuba umzobo kunye nocingo lwesitalato lubonakala, amanqaku okulawula achazwa; Ngenxa yolu nqakraza kuphela kwi-intetho (yokutolika) yomfanekiso kunye nenye iqhosha kwindawo eyaziwayo kwimephu.
Ezi zinokuba kwifayile ye-txt, kwaye ungene usebenzisa i «umthwalo» iqhosha kodwa koku kufuneka ubenazo kwifomathi eyahlukaniswe zizithuba zefom ye- "point point" «imvelaphi longitude» «imvelaphi latitude» «indawo ekuyiwa kuyo» ukuya kwindawo yokugqibela.
Kwiqhosha "lokujonga itafile" unokubona indawo nganye yolawulo, ngokwedatha onayo, unokongeza eyaneleyo ukuze umfanekiso ungcoliswe ngokusondeleyo malunga nobume bezitrato.
Emva kokuba umfanekiso uzuze uguquko, «georeferencing / ukuhlaziya georeferencing» kuyasetyenziswa.
Kungakuhle, amazwe yona kwifomati egcina georeferencing, ukuba ekunene nqakraza kwi umfanekiso, ngoko data / data kumazwe angaphandle kunye ukufometha, nabanako-IMG, TIFF okanye igridi ... nokuba ithayile esikhethwe yenziwe.
Apha ungabona iposi epheleleyo (ngesiPutukezi)
Post edlulileyo«Edlulileyo Mayelana nePaperspace
Post Next Izikripthi zokubala eziyinkimbinkimbiOkulandelayo "
Iimpendulo ze-15 kwi-"Georeferencing i-Googlemaps imephu ne-Arcmap"
holaaa ... Ndinomdla kule topic georeferenciar..pero q ndingathanda ukuba wenzayo google earth..porfa kunye 9.2 argis ... kanye wabona Imbasa imifanekiso q babekade ..todas georeferences wena ku Google earth..gracias ngu yonke into ... !!!
leonardo guera uthi:
njengoko ndenzayo ukuze ndiyazi apho balela khona ezi zifundo
Xavier Rosales uthi:
Yindawo enkulu, ndinethemba lokusebenzisana xa ndiyakwazi, qhubeka
Ukusuka apho unokutshintsha ububanzi kunye nokuphakama, ezo ndizibeka ziyimizekelo, rhoqo loo manyathelo akwiphikseli
utshintshe i-url yefayile
Kuya kufuneka ugcine ividiyo kwindawo ethile yewebhu, ukwenzela ukuba ibe nedilesi ye-url yefayile. Emva koko uyifaka kwikhowudi elula ye-html yokushumeka ividiyo njenge:
<Object ububanzi = "450" ukuphakama = "350"> <eliku src = http: // uhlobo lwefayile url = "application / x-shockwave-flash" ububanzi = "450" ukuphakama = "250"> </ iframe> </ into>
fernando moran uthi:
ividiyo yedwa kwaye ndifuna ukubonisa kuphela abanye oogxa
Ndifuna ukwazi ukuba ndingayongeza njani ividiyo kwi-brand of pocision
Sawubona, umntu unokuthi uthe wabuxazulula njani i-georeferencing? Ndazama oko yaye awudibanisi umfanekiso, la manyathelo ezisele akucaci, nayo kumfanekiso lwesine lube toolbar ekubonakala ukuba kusetyenziswa noko akukho iyavezwa.
Molo, sobabini randy ndinikhathaze ngakufuna nto kuni, kodwa ngokwenene anomdla gqitha georeference umfanekiso.
UKUFUNEKA UKUHLOLA ICANDELO ELINYE INKCUKACHA YENGXELO. KUTHANDA
»Ukusondeza imaphu okanye iindawo zolawulo ongazongeza kuyo, kunye nemvelaphi kunye nendawo oyobonakala kuyo kwiscreen sakho, oku kuyakwenza ukuba kusebenze inketho ye" tafile yokudibanisa "onokuyibona, ushiye" umthombo "omnye kwaye wongeze kwindawo oya kuyo eyaziwa njenge "imephu" enye yamanqaku akho owaziwayo, ke umfanekiso uza kuba kufutshane nendawo enomdla kuyo.
Yenza isikrini sokuprinta, uze unamathele kwiNkspaint, apho unqumle into ongayisebenzisiyo kwaye uyirekhodi njenge jpg kwi-hard drive yakho.
Emva koko uyibiza nge-Arcmap, kunye neqhosha elithi "dibanisa" njengoko uza kubiza imilo, kwaye ukhethe umfanekiso apho ugcine kuwo.
Ngaba nceda uncede undixelele inyathelo emva kokuba wenze i-printscreen, apho ndisindisa khona umfanekiso kunye nokuba ungakanani kwi-arcmap?
uku «jonga / izixhobo zebarban / georeferencing»
uzama ukulandela amanyathelo kwaye awuphumelelanga, iwindow ye-georeferencing ayibonakali ngeendlela ezikhethiweyo
Ewe, ndizinikele, andizange ndizame
Ngoku ukuba uthetha ngokuthumela ngaphandle kwaye ukhankanya i-GRID, IMG okanye iifom yefomathi yeTIFF .... Ungayithumela njani kwi-ECW kunye ne-Ermapper plugin efakwe?
Andiyena umsebenzisi waseArggis, kodwa ngolunye usuku ndicelwa loo mbuzo kwaye andingazi ukuba ndingazenza njani. Enyanisekileyo, indlela yokusebenza yaseArcgis ibonakala iphikisana ngokupheleleyo nokusebenza.